Shahaadada Bachelor Degree ee Jaamacadda Magaalada London Deeqda Hogaamiyaasha Caalamiga ah ee UK, 2019 2022
July 23, 2019 Okpara Francis
Soo jiidashada uqalmida EU iyo ardayda caalamiga ah, Jaamacadda Magaalada London waxay siineysaa Hogaamiyaasha Caalamka maalgelinta sanadka 2019-2020.
Abaalmarinta waxaa loo aasaasay iyada oo lagu saleynayo mudnaanta aqooneed oo loo heli karo in lagu sii wado barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Magaalada, Jaamacadda London waxaa loo abaabulaa shan iskuul, oo gudaheeda ay ku yaalliin afartan waaxyo iyo xarumo tacliimeed. Waa xubin ka tirsan Ururka MBA-yada, EQUIS iyo Jaamacadaha UK. Waxay bixisaa shahaadada Bachelor-ka, Master-ka, iyo Dhakhaatiirta iyo sidoo kale shahaadooyin iyo dibloomaasiyo.
Waa maxay sababta Magaalada, Jaamacadda London? Jaamacadu waxay ardayda u siisaa xirfad, adeeg tayo sare leh iyo macluumaad. Halkan waxay ka heli karaan khibrada shaqo ee looga baahan karo mustaqbalkooda mustaqbal.
Jaamacad ama Urur: Jaamacadda Magaalada London
Heerka Koorsada: Darajada Bachelor
Award: £ 1,000
Qaabka Helitaanka: Online
Dhalashada EU iyo ardayda caalamiga ah
Abaalmarinta waxaa lagu qaadan karaa Boqortooyada Midowday (UK)
Dalalka u Qalma: Sheegashooyinka ka socda wadamada EU iyo aduunka oo dhan
Koorso La Aqbali karo ama Maado Barnaamijka shahaadada Bachelor-ka ee maado kasta
Shuruudo La ogolaan karo: Si aad ugu qalanto sanduuqan, codsaduhu waa inuu noqdaa EU ama arday caalami ah oo leh wadan u dhigma 'A'.
Ardayda caalamiga ah ee qaadanaya barnaamij aasaasi ah oo caalami ah oo la aqoonsan yahay.
Musharaxa waa inuu dalbadaa sanadka ugu horeeya ee daraasadda shahaadada koowaad ee 2019/20 oo uu ku guuleystaa buundooyinka ku xusan shuruudaha ay ka bixiyaan Magaalada.
Sida loo Codso: Haddii aad rabto inaad dalbato abaalmarintan waxbarasho marka hore waa inaad qaadataa gelitaanka Shaqo koorso shahaadada heerka koowaad ah jaamacadda. Marka la aqbalo ka dib, dadka shaqo doonka ah waxaa si toos ah loola xiriiri doonaa casuumaad si ay isu diiwaan geliyaan fursadda.
Taageerida Dukumentiyada: Ma jiraan dukumiintiyo taageeraya oo loo baahan yahay deeqdan. Waqtiga la codsanayo, jaamacadda ayaa la weydiisan karaa iyada.
Shuruudaha Ogolaanshaha: Qaadashada xaqiijinta, codsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay la kulmaan shuruudaha gelitaanka jaamacadda.
Shuruudaha Luqadda: Musharrixiinta waxay u baahan yihiin inay muujiyaan inay la kulmeen aqoonta luqadda Ingiriisiga.
Faa'iidooyinka: Codsadeyaashu waxay heli doonaan qadar qiimihiisu yahay £ 1,000.
Dambaynta Diiwangelinta: September 30, 2019
Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
Previous Post:Keele Lacagta Khidmadda Lacagta ee Qiime-dhimista Caalamiga ah ee Sare ee Boqortooyada Midowday ee UK, 2019-2020
Post Next:$ 100,000 Farmashiyaha Caalamiga ah ee Shahaadada Jaamacadeed ee Australia, 2020
Vincent Nyakambi wuxuu leeyahay,
August 18, 2019 at 6: am 34
Sidee loo codsan karaa in wax laga barto jaamacaddaada ugu caansan ee deeqda waxbarasho?